जन्मले दलित पनि अध्यात्मिक चेतनाले ब्राह्मण बन्न सक्दछन - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
जन्मले दलित पनि अध्यात्मिक चेतनाले ब्राह्मण बन्न सक्दछन
केहि मित्रले सोध्नु भयको प्रश्नको उत्तर
हिन्दू धर्मले कुनै पनि जातिलाई अपहेलित जाति भनेको छैन। वेदमा उल्लेखित ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, सुद्रको वास्तविक अर्थ नबुझी श्रम विभाजन हुँदै अन्तमा स्थायी विभाजन बनाउन खोजिएको हो। नेपालमा तल्लो जातलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाउँ निकाला गर्नेको संख्या बढी छ कि त्यस्तो गर्नु हुन्न भन्नेको संख्या बढी छ?
एकाध पटक पत्रपत्रिकामा आएको घटनाले पुरै हिन्दू धर्मावलम्बीको मानसिकता देखाउँछ? हिन्दुत्व मै आधारित रहेर समानता र एकताको निम्ति खटिएका विवेकानन्ददेखि कयौँको प्रयासलाई चटक्क बिर्सेर ‘हिन्दू धर्ममा हेपियौँ अब अब नहेपिने धर्म तिर लाग’ भनेर लालिपप देखाउने धर्म परिवर्तन डरलाग्दो धार्मिक प्रचार मान्ने कि नमान्ने?
हिन्दू धर्म बाहेक अन्य धर्मावलम्बीले उँचनिच र भेदभाव गर्दैनन् भन्ने लाग्छ र हेपिएको भनिएको जातिलाई त्यतै लागे समानता पाइन्छ भन्ने हो भने एकपटक सत्यमेव जयतेको यो कार्यक्रम हेर्नुहोस् !
इसाई र इस्लाम धर्ममा हुने भेदभाव प्रष्ट हुनेछ। इराक, इरान, सिरिया र अफगानिस्तानका सिया र सुन्नी बीचको भिडन्त। पश्चिम देशमा कालाले गोरालाई ‘बाइबल’को आधारमा ‘व्हाइट डेभिल’ र गोराले कालालाई ‘दास’ भनेर् गरिने भेदभाव। यी सब मानिस आफैले गरेका हुन्। कुनै पनि धर्मले मानिस मानिस बीच भेदभाव गरेको छैन। ब्राह्मण,क्षेत्रीय, सुद्र, वैश्यको वास्तविक अर्थ बुझ्नु पर्छ :
• क्षेत्रियबाट माथि उठेकाहरु सब्बै ब्राह्मण हुन् ! चाहे त्यो दलित समुदायमा जन्मिएको होस ! चाहे त्यो गैरदलित होस ! चाहे बाहुननै किन नहोस ! यदि बाहुन पनि यौनमा निर्लिप्त छ भने त्यो शुद्र हो ! भुंडि चिन्तामा लिर्लिप्त छ भने त्यो वैश्य हो ! अनि श्रममै निर्लिप्त छ भने त्यो क्षेत्रीय हो ! ब्राह्मण हैन त्यो बाहुन !
हिन्दू धर्मको अर्थ चप्पल सुल्टो पार्नु, बिरालोलाई बाटो नकटाउनु, धूप बाल्नु, नरिवल चढाउनु होइन । तर ‘अलोक निरन्जन’ भन्दै भिक्षा माग्न आउनेले केही सिकाएनन भनेर भन्नु मुर्खता हो। स्कुल कलेज पढेको, राम्रै जागिर, राम्री श्रीमती हुँदा हुँदै पनि मनमा कहीले शान्ति नभएपछि ‘सन्यासी’ बनेर लोभ, लालच, मोह, रिस, डाह भन्दा एक कदम माथि उठ्न सब छोडछाड गरेका असल जोगी हिन्दू धर्मका धरोहर हून। जोगीको भेषमा ति मध्ये केही ठग-माग्ने हुनसक्छन, केही कामचोर अल्छी हुनसक्छन। तर अब उप्रान्त राम्रोसँग नियाल्नु कतै ती बिरक्तिएर जगत बुझ्न हिडेका भोलिका नरेन्द्र मोदी त होइनन ?
शिव लिङ्ग पुजा किन ?
हिन्दू धर्ममा प्राय: पुजिने शिवलिङ्गको को बारेमा । शिवको लिङ्ग मात्र होईन पार्वतीको योनी पनि छ। सम्भोगको प्रतिकात्मक उपस्थिती हो शिवलिङ्ग। सम्भोग सिर्जनाको पहिलो खुट्किलो हो। सम्भोग प्राप्तिको नीम्ति प्रेम जन्मिन्छ। सम्भोग कै क्रममा आनन्द मिल्छ। जुन मानिस सम्भोगको उद्देश्य पूरा गरेर एक कदम माथि उठ्छ, त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्छ। एक हिन्दूको जीवनमा चार खण्ड हुने गर्छन् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अर्थात् कर्म। बिद्यार्थीले पढ्नु उसको धर्म हो। त्यसको फलस्वरुप उसले सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्पन्नता कमाउँछ जुन ’अर्थ’ हो। जसको उपयोग गर्दै उसले गृहस्थी जीवनमा ’काम’ अर्थात् सम्भोगको भरपुर आनन्द लिन्छ। त्यो ‘काम’ को अवस्था हो। यी तीन चरणबाट माथि उठाउन शिवलिङ्ग मात्र होईन अनेकौ यौन आकृति यत्रतत्र छन् हिन्दू धर्ममा। भौतारिएकाहरूलाई घच्घक्याउन।
कति करोड देउता ?
मनमा शान्ति नभएकाहरूलाई इश्वरिय तत्वबोध गराउन अनेकौ धर्म छन्। सबै धर्म आ आफ्नै तरीकाले ईश्वरीय तत्वबोध गराउन लागिपरेका छन। जिसस क्राइस्ट आफैमा देवता होईन तर परमात्माको छोरा हो भनिन्छ। पैगम्बर मोहम्मद आफै देवता होईन अल्लाहको अन्तिम दुत हो भनिन्छ। गौतम बुद्धले निर्वाण प्राप्त गरेको कारण इश्वरिय तत्व आफ्नै भित्र अनुभुत भएको भनिन्छ। हिन्दू धर्म यी सबै धर्म भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको छ। इश्वरिय तत्व बोध गराउन बिभिन्न समयमा बिभिन्न घटना र अवस्थाका पात्रलाई अगाडी राखिएको कारण कालन्तरमा भने जस्तो करोडौ देवता भन्नुपर्ने स्थिति आएको हो। त्रेतायुगमा सत्यको पक्षधर राम। द्वापर युगमा सत्यको पक्षधर कृष्ण। यी सबै रूपमा फरक भएपनि रुप एकै हून। ज्ञानको प्यासी हुनुहुन्छ भने मोक्षप्राप्त गर्न सरस्वती तपाईको सामुन्ने छिन्। द्रब्यको पछि लाग्नु भएको छ भने लक्ष्मीसँगको शाक्षातकार तपाईको अन्तिम लक्ष्य हो। संगीत, कला, राजनिती, कुट्निती, कला, यौन, द्रब्य, सुरबीर, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि मोक्षको द्वार खोल्न रूपमा करोडौ मात्र होईन अरबौ पुग्ने इश्वर हुनसक्छन। तर सार त एउटै हो। त्यहि ब्रह्म तत्व हो। त्यहि क्वान्टम मेकानिक्सको ‘गड पार्टिकल’ हो।
गाई पुजा किन ?
पाउडर दूध, ट्रेक्टर र युरिया मलको बिकासपछी सुरु भएको धर्म भएको भए सामाजिक रूपमा गाईको पूजा गरिंदैन । तर हिन्दू धर्म कहिलेदेखि सुरु भयो येकिन इतिहास भेट्नै गाह्रो छ। युग युग कटेको छ। प्राचिनकालमा आमा बिरामी हुँदा नाबालकलाई पौष्टिक दूध खुवाउने पनि गाई। खेतको उब्जनी बढाउन मल दिने पनि गाई। गाई कै सन्तानले खेत जोतेर अन्न उब्झाउने, अनि नपुजेर के गर्नु ? यी त सामाजिक चलन भए। हिन्दूदर्शन मै आधारित भएर भन्ने हो भने असल हिन्दू, बौद्ध, किराँती, जैन जस्ता ॐकार परिवारका सदस्यले कसैलाई मारेर खाँदैन। स्वादको निम्ति हिँसा गर्नु ठीक होईन। अहिले एनिमल राइटसको नाममा पशुपन्छीलाई यातना दिई तिनको भुत्लाबाट बनेको पोसाक, पर्फ्युम नलगाउने, मासु खरिद नगर्ने क्याम्पेन देख्नुभएको होला। असल हिन्दूलाई यो क्यामपेनमा सहभागी हुन आवश्यक छैन। किनभने ती सुरु मै बाघलाई पनि देवता मान्छन। गाईलाई पनि देवता। कुकुर् पनि देवता। सिधै भन्दा कण कणमा ईश्वर देखिन्छ , आँखा खोलेर हेर।
गाईको पिसाब पनि खान्छौ ?
गाईको मात्र होईन मित्र आवश्यक पर्नेले स्वमुत्रपान पनि गर्छन्। तर हिन्दू हुँदैनमा गाईको मुत्रपान गर्नैपर्छ भन्ने छैन। आयुर्बेदमा मुत्रपान के कतीको महत्व छ,आयुर्बेद शास्त्रले बतायाको छ , क्यान्सर देखि ७५ वटा रोग निको हुन्छ ।
इश्वरीय तत्वमा विश्वाश छ; ब्रह्माण्डबाट आउने अथाहा शक्ति योग साधनाद्वारा अनुभव गर्न सकिन्छ; कण कणमा ईश्वरको बास हुन्छ भन्ने बिश्वास छ भने गणेश पनि कहीँ मुसामा चढ्न सक्छ भन्ने प्रश्नै उठ्दैन थियो। गणेशलाई ईश्वरको प्रतिक मानिसकेपछि मुसामा चढ्न सकिन्छ की सकिदैंन भन्नु निर्देश गर्ने कुरा होईन। शक्तिशाली भगवान मानिसकेपछि मुसामाथि भन्दा डाइनोसोरसमाथी चढ्नुपर्ने मान्यता राख्नु मुर्ख हो । तर हिन्दू धर्मले दिएको मार्ग निर्देशनलाई चटक्क बिर्सेर मुसा, लड्डु, पेडामा बिबेक मन्चन नगरेकै राम्रो ।